Rant: Hurumende yeUS Inoparadza Internet Commerce | Martech Zone
Rant: Hurumende yeUS Ichaparadza Internet Commerce
Chipiri, Kurume 26, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Hupfumi hwenyika hwaenda kumawere muUnited States. Nekushandisa marekodhi, gwanza rehupfumi riri kuramba richiwedzera, hurombo huri kukwira, huwandu hwevagari vanovimba nekushaikwa kwemabasa, zvitambi zvekudya, kuremara kana hutano zviri pamatanho. Kune chikamu chimwe chete chehupfumi hweAmerica chiri kubudirira - nemabasa anobhadharwa zvakanaka, kuvhurwa kwemabasa, matani emari yekudyara, uye kukura kwekutengesa. Chikamu ichocho Internet.
Nemabhizimusi makuru emabhokisi anotambura uye nehurumende kushandisa mari pazvidzidzo mune dhadha genitalia, ramangwana re ecommerce boom rinotaridzika kunge risina tariro seSeneti ingobvumidza bhiri pane yeInternet Kutengesa mutero. Saka… chikamu chimwe chete chehupfumi icho chisiri kutambura chave kuzopedzisira chajoinha imwe neimwe nzvimbo yeupfumi yanga iripo akabatsira nehurumende yemubatanidzwa.
Kana bhiri iri rikapasiswa, ndiko kutanga kwekuguma kwebudiriro yedu yepamhepo yemusika yemusika yakatipa isu kwemakore makumi maviri apfuura. Vakuru mabhizimusi mabhizimusi vatengesi vane yavo, vanodzora nekutarisira mitengo uye kugoverwa kwezvinhu uye masevhisi izvozvi varasikirwa nehutanda hwavo kuInternet… uye ivo vari kuchema zvakashata. Ivo ndivo vari kutungamira nzira mukumanikidza vatungamiriri vedu kubhadhara mutero weInternet.
Wese munhu Akavhurwa Kukwikwidza paInternet
Vanofanira kunyara. Funga nezvazvo… ivo hapana kana chinhu kunze kwenzvimbo yekugovera iyo inowedzera pamusoro wepamusoro wemutengo wezvinhu tisati tazviwana. Ndine chivimbo kana iwe ukatarisa kumashure munhoroondo kuti vatengesi vakachema zvisina tsarukano apo iyo Sears Catalog yakaita nzira yayo kumusuwo wevatengi uye ivo vanga vava kugona kuwana zvigadzirwa zvinodhura uye nhumbi kuburikidza neakananga tsamba. Ose makuru mutengesi wemabhokisi aive nemari uye nemukana wekuchinjisa bhizinesi ravo kuenda kuInternet. Kana vakatadza kuita kudaro, vanofanirwa kutarisana nemhedzisiro yacho.
Yemunharaunda Makambani Anofanirwa Kubhadhara Yemunharaunda Mitero
Kuve nemunharaunda yakakura bhokisi mutengesi anowedzera mari kunharaunda yemunharaunda - kubva pamutengo wekufambisa, mutengo wemotokari, mapurisa nemari yekurapa, kune mari yekushandisa… kusanganisira mvura, magetsi nemarara. Nyika uye zvemuno zvekutengesa mutero zvinokanganisa izvo zvinodhura mudunhu remuno. Iyo system ine musoro. Kana ndikaita kutenga online, zvinotora nharaunda yangu yemuno hapana. Zvekufambisa zvinobhadharwa nekambani yekutumira nemitero yepeturu. Hapana kudiwa kwemarobhoti, hapana anosungwa muzvitoro, hapana kuraswa kwemarara, hapana chikonzero chekuwedzera zvekushandisa… nada.
Vatengesi havasi kurasikirwa Bhizinesi nekuda kweMitero Yemunharaunda
There ndivo bhenefiti yekutenga kune mutengesi wemuno… ndinokwanisa kutyaira kumba nezvinhu, ndinogona kuyedza mbatya, ndinogona kuti vaise zvekushandisa, ndinogona kuwana rutsigiro rwechigadzirwa kubva kwavari, kana ndinogona kuchinjana kutenga pasina kunonoka. Ini ndinowanzo shanyira kune weko mutengesi - asi zvakanyanya kushoma pane zvandaimboita. Indaneti yava nyore. Ini handitenge online nekuti ini handibhadhare mutero imomo… ndinotenga online nekuti ndinogona kuzviita kubva kufoni yangu mune maminetsi. Hapana kutyaira, hapana kupaka, hapana kumirira mumutsara, hapana kutsvaga mitsara isingaperi yezvigadzirwa, hapana chinotyisa vanhu vanoita basa, kana vanosundidzira, kana vasingafarire, kana pasina rubatsiro zvachose.
Kuvhura iyo Pandora Bhokisi reMunharaunda Mitero
Iyo yemutero hwaro inonyora pamusoro 9,600 XNUMX emunharaunda emitero yemitero. Fungidzira yega yega ecommerce saiti ikozvino inofanirwa kuronga kune 9,600 dzakasiyana dzemunharaunda mitero iyo iri kuramba ichichinja. Yese nharembozha yekushandisa inoda kuvakwazve kuchirongwa mumazana mazana matanhatu nemazana matanhatu emitero. Ecommerce vanopa vanofanirwa kuisa mutero mukati nzvimbo dzese vanoita bhizinesi mukati. Ndicho nzungu.
Yemunharaunda Mutero ichauraya Kuita Entrepreneurship
Taura hako bhizinesi rega rega padandemutande risingakwanise kuzadza musoro unobatana neaya mutengo. Chokwadi ... mhinduro nyowani dzinozochinja, mabhizinesi matsva anotarisira mafirita emitero iwe. Asi iyo mutengo ichawedzerwa pane chese chigadzirwa chaunotenga - kuwedzera kune mutsva wekutengesa mutero. Nzvimbo dzekutengesa chete dzakasara dzichava vakomana vakuru vanogona kutenga mari uye vakatanga nyonganiso pakutanga. Mabhizimusi madiki uye vezvemabhizinesi vakakwenya.
Izvi zvinoita here kuti munda utambe zvakanaka pakati pevatengesi neecommerce? Hapana chakanaka pamusoro pazvo. Chikamu chekupedzisira chehupfumi hweAmerica icho chiri kubudirira chichajoinha munhu wese mukusiya basa, kushomeka kwemari, uye kubuda mukutengesa bhizinesi. Pamwe chete nemabhizimusi makuru ebhokisi ayo anga achitonanga nekwakananga kuya.
Tags: ecommerceIndanetiinternet yekutengesa muterointernet muteromutero wekutengesa wemuno
Perforce: Shanduro Zvese
Apr 22, 2013 pa 6: 04 PM
Ini ndinofungidzira isu tinofanira kutanga kubhadharisa email kuti tive "zvakanaka" kuhofisi yepositi.